Soosaarka Warshadaha Shiinaha iyo Warshadaha | Pantex
Magaca badeecada Goggles Nabdoon
Moodel Maya. SL-60
Cabbirka Dhererka muraayadda waa 15cm, dhererka muraayadda waa 8cm, balaca guud waa 7cm, masaafada sanka waa 3cm, iyo
Masaafada geesku waa 17.5cm (gacanta lagu cabbiro, waxaa jira khalad 1-2cm ah)
Qaab dhismeedka qaab dhismeedka ugu weyn Maaskaro indhaha oo go'doomin ah wuxuu ka kooban yahay maaskaro ilaalin ah iyo faashad laastikada dabacsan. Laydhka PC-ga iyo qaab-dhismeedka PVC, Isku-dhafka-xoojiyay ee isku-dhafka ah wuxuu ku guuleystaa saameynta anti-fog iyada oo loo marayo injineernimada nano-dusha iyo xoojinta. Aan-jeermis lahayn, isticmaal keliya
Baaxadda dalabka Waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo xarumaha caafimaadka inta lagu jiro kormeerka iyo daaweynta, xannibinta dareeraha jirka, dhiig ku daadinta ama daadinta.
Xidhmada Boorsada 1PC / PE, 15PCS / BOX, 150PCS / CTN
Moodeel / Sheegasho Nooc dhinaca ah
1. Fur xirmada si aad alaabta u soo saarto.
2.Markaad furto faatiirka faashad goorta aad xirato, ku xir googooleyaasha meel aad u fiican si ay ubaxyadu u le'ekaato wajiga si adag.
3. Xirfad jilicsan (la jaan qaada myopia iyo muraayadaha akhriska), goob ballaaran oo aragga ah, ka hortagga ceeryaanta, ka hortagga buufiska, ka-hortagga.
1.Na-sterile. Fadlan si taxaddar leh u akhri tilmaamaha intaadan isticmaalin. Waa in la isticmaalo 2 sano gudahood
2. Laydhku wuxuu rakibay teknolojiyada laba-dhinac leh ee anti-fog-fog, oo aan lagu tirtirin karin tuwaal waraaqo ama maro ah, si aan loo dhaawacin lakabka filimka-sunta loona gaabiyo nolosha adeegga.
3. Ku dabool ama ku hay leniska maro jilicsan oo Nano ah. Ha dhaqin.
4. Laydhku wuxuu qaataa daahan tikniyo-isku-daawayn ah si looga fogaado walxaha fiiqan inay xoqan dusha sare ee lenska.
Muraayadaha indhaha dib ayaa loo isticmaali karaa ka dib marka si xirfad leh looga jeermiyo (oo aan la qooynin dareeraha). Waa mamnuuc in la isticmaalo cabitaanno ay ka kooban yihiin waxyaabo kiimikaad (sida saabuunta, budada dharka lagu dhaqo, saabuun iyo aashitada ama alkolada)
Hore: Gacmo gashiga Baaritaanka Birta-bilaashka ah ee Daawada Vinyl
Xiga: Daboolida Kabaha Tuur
Muraayadaha Amniga Caafimaadka